मेसी र रोनाल्डोको झगडामा लोग्नेले दिए डिर्भोस ! - मेसी र रोनाल्डोको झगडामा लोग्नेले दिए डिर्भोस !
मेसी र रोनाल्डोको झगडामा लोग्नेले दिए डिर्भोस !
नेपालबहस संवाददाता २०७५, २२ असार, 09:55:13 AM
मस्को । रूसमा जारी रहेको विश्वकप फुटबलबाट अर्जेन्टिना र पोर्चुगल बाहिरिइसकेका छन् । तर पनि यी दुई देशका समर्थकबीच दुई सुपर स्टार लियोनेल मेसी र क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई लिएर निरन्तर बहस चल्दै आएको छ ।
यी दुई खेलाडीमा को उत्कृष्ट भन्ने बहसले समर्थकहरुबीच कुटाकुट र गालीगलौजसम्म हुने गरेको छ। यस्तै एउटा रोचक घटना विश्वकप आयोजक राष्ट्र रसियाबाट आएको छ । एक व्यक्तिले क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई लियोनेल मेसी भन्दा उत्कृष्ट भनेको झोँकमा पत्नीलाई तलाक दिएको समाचारले अहिले फुटबल जगतलाई तताएको छ।
यो घटना २६ जुनमा भएको हो । त्यसदिन अर्जेन्टिनाले नाइजेरियालाई २(१ ले हराएको थियो । यस जीतपछि आर्सेन नामका एक व्यक्तिले मेसीको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई लिएर खुसीयाली मनाउन सुरु गरे ।
यसै क्रममा पत्नी ल्युडमिलाले रोनाल्डोलाई मेसी भन्दा धेरै उत्कृष्ट भएको बताइन् । पत्तीले बारम्बार यो कुरा गरेपछि आर्सेन रिसाए । रिसाएका आर्सेनले त्यही झोँकमा घर पनि छाडिदिए । यति मात्रै होइन उनले भोलिपल्ट बिहानै पत्ती ल्युडमिलालाई सम्बन्धबिच्छेदको पत्र नै पठाइदिए ।
सन् २००२ को विश्व कपका क्रममा उनीहरुबीच प्रेम भएको थियो । ‘आर्गुमेन्तो आई फाक्ती’लाई दिएको अन्तर्वार्तामा आर्सेनले बताए अनुसार ल्युडमिलासँग २००२ को विश्वकपका क्रममा भेट भएको थियो ।
केही समयपछि उनीहरुबीच बिहे भएको थियो । आर्सेनका अनुसार यस विश्व कपमा ल्युडमिला लगातारले उनलाई मेसीको नाममा जिस्काइरहेकी थिइन् । साथै आइसल्यान्डविरुद्ध मेसीले पेनाल्टी नहानेपछि त उनले हैरान नै बनाएकी थिइन् । यही कारणले मैले घर र ल्युडमिलालाई सदाका लागि छाड्ने निर्णय गरेको हुँ, उनले भनेकी छन् ।
२०७५, २२ असार, 09:55:13 AM